One response to “ဘ၀အိုအေစစ်”
20 November, 2009 at 8:31 pm
ငါတို့တွေခဏခဏပြောကြတဲ့ ပုံပြင်လေးပါဘဲ။ ငါအရမ်းကြိုက်တဲ. ပုံပြင်လဲဖြစ်တယ်။ ငါးဖမ်းသမားနဲ. သူဌေးကြီးပုံပြင်လေ။ ငါဒီညအိပ်ရပါ့မလားတောင်မသိဘူး။ မနက်ဖြန် CEDN သွားရမယ်။ ဘာသွားလုပ်မှာလဲ။ ပညာရှိများစကားကြားချင်တယ်လေ။ ဗဟုသုတတွေထပ်ရချင်တယ်လေ။ ငါလေ့လာသင်ယူနေရတာတွေနဲ့ ဆိုင်နေတယ်လေ။ ငါစိတ်ဝင်စားမိနေတယ်လေ။ သူများပြေသမျှဘဲ အကုန်ထိုင်နားထောင်နေရမလား။ ငါ့အတွေးအမြင်တွေကိုရော ဖော်ပြလို့မရဘူးလား။ ငါလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းတော့ မရရေးချမရ။ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဖတ်ပေတော့ ဖတ်ပေတော့၊ organizer ပို့ထားသမျှ တပုံတခေါင်းကို ဖတ်ပေတော့။ PCBမှာလည်း presentation လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အရေးထဲမှ ဆရာတွေအမှားကြောင့် ငါလုပ်ရမယ့်ရက်က ရှေ့ကိုနှစ်ရက်ပိုစောသွားတယ်။ မနက်ဖြန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရမယ်။ လုပ်ပေတော. အချက်အလက်တွေရှာ၊ “Deforestation” တဲ့၊ Myanmar & Amazon(in Brazil) ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတဲ့၊ statistic တွေပါရင်ပိုကောင်းမယ်။ situation, problem and possible solution တွေကမဖြစ်မနေပါရမယ်၊ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းတွေဘဲ သုံးချင်တယ်။ လုပ်လိုက်စမ်းပါ အကောင်းစားslide show လေးတစ်ခု၊ အချိန်မရှိရင် မအိပ်နဲ့ပေါ့၊ အဲဒါတွေမလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါတွေလုပ်တော့ရော ကမ္ဘာကြီးဘယ်လောက် ငါ့ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားလဲ၊ ဝေးပါသေးတယ်။ ငါးဖမ်းသမားနဲ. သူဌေးကြီးရဲ့ လိုရာကအတူတူပါဘဲ၊၊ ခက်နေတာကဘာလဲ၊ လူရဲ့အတ္တဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်၊ လုပ်စရာတွေကလည်း များလိုက်တာ၊ APSC အတွက်လည်းအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး ၊ lesson plan တွေလည်းဆွဲရအုန်းမယ်၊ လေ့လာစရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ရအုန်းမယ်။ ခက်နေတာက ငါရေသန့်မသယ်နိုင်တာဘဲ၊လက်တွေ့ဘ၀က ခဏခွာလို့ မင်းသမီးနေရာမှာအစားမထိုးရရင်နေပါ။ ငါဆိုက်ကားမနင်းနိုင်ပါ၊ ဒါဆိုရင်တော့ အမြင်မှန်ရသင့်ပါပြီ၊ ငါစဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိသေးတယ်၊ အခုနေများ ပိုက်ဆံရှိရင်တော့ ကုလို့ရသေးတဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရောဂါတစ်ခုနှစ်ယောက်လုံးခံစားရပြီဆိုပါဆို့၊ လူတိုင်းတော့တစ်နေ့သေရမှာပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့် ပျော်နေရတဲ့ဘ၀မှာဘယ်သူသေချင်မလဲ။ ဒီလိုအခြေအနေဆို ဘယ်သူပိုစိတ်ဆင်းရဲရမလဲ၊ တစ်ယောက်က အသက်ကိုကောင်းကောင်းဆွဲဆန်.နိုင်အုန်းမယ်၊ တစ်ယောက်ကတော့ သေမင်းကိုအရှုံးပေးပေတော့၊ ဒီနေရာမှလည်း သူကသေဖို့မကြောက်ဘူးဆိုရင် ပြေရခက်သွားပြန်ရော၊ ဘ၀မှာအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာ မရှိဘူးနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးဘဲ ပျော်ပျော်နေဖို့တော့လိုပါတယ်၊ ငါတို့တွေ အတွက်လည်း Oasisကျိန်းသေပေါက်ရှိတယ်လို့ ယုံတယ်၊ ကြိုးစားကြစို့
LeaveaReply to Shwe@Pollen Cancel reply